जनताको सेवा गर्न चुनिएका हौँ, मर्नुपरेपनि राजिनामा दिदैनौँः कर्णाली जनप्रतिनिधि
कर्णालीका स्थानीय प्रतिनिधिलाई विप्लव समूहबाट पटक–पटक राजिनामा दिन दबाव
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजीनामा माग्दै पत्र पठाएपछि कर्णालीका जनप्रतिनिधि त्रसित बनेका छन् । पत्रमा राजीनामा मागिएको र असुरक्षित बनेको भन्दै कर्णाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु त्रसित बनेका हुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पामा विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पदबाट राजिनामा दिन वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म लाई बेलाबेलामा धम्की दिने गरेको पाइएको छ ।
यसकारण कर्णालीका जनप्रतिनिधि त्रसित बनेको कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शुरेस पहाडीले जानकारी दिए ।
पहाडीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुलाई भन्दा ग्रामिण क्षेत्रका गाउँपालिका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षलाई राजिनामा दिन बढी दबाब आइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसँग जनप्रतिनिधिहरुले सुरक्षाको माग गरेपनि जुम्लाका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु राजिनामा नदिने बताएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले बताए ।
जनताले चुनेर आएका कारण धम्कीको परवाह नगरी काम गर्ने मर्नै परेपनि राजिनामा चाहिँ नदिने प्रतिनिधिले जानकारी दिएको तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज न्यौपानको दाबी छ ।
राजिनामा नदिएपनि विप्लवबाट आफू माथि खतरा रहेको भन्दै प्रशासनसँग सुरक्षाको माग भइरेहको न्यौपानेले बताए । विशेष कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदबाट राजिनामा दिन विप्लपले ह्वीपसमेत जारी गरिसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले राजधानीमा गरेको छलफलका क्रममा पनि सांसदहरुले आफूलाई राजिनाको धम्की आउने गरेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेको पत्रकार सुरजकुमार सिंहले सुर्खेतबाट टेलिफोनमा जानकारी दिए । यता, तातोपानी गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष कृष्ण बुढाले ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो राजिनामा मागिएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ? कसैले राती काम परेर बोलाउदा मन चिसो हुन्छ ।’
यस्तै कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशिचन्द्र बरालले जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘भरपर्दो सुरक्षा छैन, हामी बाटोमा हिँड्दा कसले सुरक्षा दिने ? जतिबेला पनि धम्की दिइरहेका छन् ।’
जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने महतले प्रदेश सरकारले सुरक्षा नदिए सजिलै काम गर्ने अवस्था नरहेको बताइन ।
जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा स्थानीय प्रशासनदेखि प्रदेश सरकार मुकदर्शक भए समस्या निम्तिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
यता, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्थानिय तहदेखि प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरु असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा यस विषयमा प्रदेश सरकार निकै गम्भीर भएको बताए ।
उनले टेलिफोन मार्फत भने, ‘देशको नयाँ सविंधान कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा केही तत्त्व भएका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई असजिलो भइरहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन गृहमन्त्री नरेश भण्डारीले धम्की र पत्र आउँदै डराउनु पर्ने स्थिती नरहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सुरक्षाको पूरा ग्यारेन्टी लिन्छ ।
सबैलाई ढुक्क भएर जनताको काम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । समृद्ध कर्णाली प्रदेशका लागि जस्तोसुकै प्रतिबद्धता मोल्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मंगलबार, २९ फागुन ०७४